I-Garden Cottage - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDeirdre
IGarden Cottage yiBhodi yabakhenkethi yaseMntla Ireland evunyiweyo entle enamagumbi okulala amathathu ajonge eLough Foyle kunye neenduli zaseDonegal.
Ibekwe kwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo kwiNdlela yoNxweme yaseCauseway.
Umgangatho ophantsi unekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokutyela elinegumbi elisebenzayo elahlukileyo.
Igumbi lokuhlala eliphangaleleyo elinesitovu esivuthayo.
Beka kwi-acre yemihlaba yabucala iGarden Cottage sisiseko esifanelekileyo sokuphonononga izinto ezininzi ezinomtsalane zeCauseway Coast kunye neGlens.
Ngestovu esitshisayo selog (kuya kubonelelwa ngokhuni) indawo yokuhlala etofotofo, isikhululo sedesika yokusebenzela, iTV, iDVD kunye neWii console. Kwakhona iWiFi kulo lonke ikhaya.
Ikhitshi / Indawo yokutyela
Ikhitshi lelizwe elinetafile enkulu yokutyela yezihlalo ezi-6 kunye nezitulo, eziqhayisa indawo yokuhlala eyahlukileyo enesuite ekhululekile. Ikhitshi ebanzi ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-cooker, i-induction hob, i-fan ekhutshiweyo, i-dishwasher, i-microwave, i-toaster, ifriji yefriji, i-tv, isitulo esiphakamileyo sabantwana kwaye igcwele ngokupheleleyo iimbiza ezibalulekileyo zokupheka, iipani, i-cutlery, i-crockery njl.
Ii-essential condiments, isonka nobisi ziya kubonelelwa.
Igumbi lokuhlambela elisezantsi kunye negumbi lokuhlambela
Kubandakanya umatshini wokuhlamba kunye ne-tumble dryer, ibhodi yoku-ayina kunye nentsimbi ebonelelweyo. Kukho igumbi lokuhlambela elahlukileyo elineWC kunye nesitya sezandla.
Iveranda engaphambili/indawo yokungena
Igumbi lelanga elijonge ngaphezulu kwegadi yabucala yangaphambili, enesitulo esitofotofo kunye netafile. Indawo entle ezolileyo yekofu.
Ibekwe kumgangatho woku-1, igumbi lokulala elikhulu linemibono emangalisayo ejonge emaphandleni. Kunye Deluxe antique kingsize sleigh ibhedi, iitafile ezisecaleni kwebhedi, itafile yokunxiba zakudala, ukuxhoma kunye nendawo yokugcina ebonelelweyo kunye nemfama emnyama.
Ifestile enkulu ejonge i-Lough Foyle enebhedi epholileyo ephindwe kabini, iitafile ezisecaleni kwebhedi, isinxibo sakudala, isipili esigcweleyo, indawo yokuxhoma kunye nemfama emnyama.
Imbonakalo entle yelizwe elijikelezileyo elineebhedi ezingamawele zamandulo, isinxibo esinesipili, indawo yokuxhoma kunye nemfama emnyama.
Igumbi lokuhlambela langoku elinegumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlambela elahlukileyo, isitya sezandla kunye neWC.
Iitawuli kunye nezinto zangasese zinikezelwe.
Kukho isihlomelo esincanyathiselwe kwindlu enkulu ebonelela ngekhitshi elahlukileyo, indawo yokuhlala kunye negumbi lokulala le-en-suite. Indawo yokupaka nokusetyenziswa kwegadi engasemva kwabelwana ngayo nesihlomelo. Iyafumaneka ukuze ubhukishe kuluhlu olwahlukileyo (isihlomelo sendlu yasegadini) okanye ngokuqhagamshelana nombuki zindwendwe.
Igadi encinci ebiyelweyo yabucala engaphambili ukuze uyisebenzise enebhedi yeentyatyambo ezilinyiweyo, ingca kunye nendawo yokuhlala kwindawo yokutyela i-allfresco.
Indawo ekwabelwana ngayo
Ihektare yegadi esele ikhulile ngasemva kwipropathi ekwabelwana ngayo kunye nabaxhasi besiHlomelo.
Kukho iindawo ezininzi ezizimeleyo zokuphumla kunye nokutya. Isitiya esinabileyo sibamba ilanga imini yonke kunye nemithi emininzi evuthiweyo enomthunzi phantsi kwayo. Ukujinga kweTire kunye nendawo enkulu yengca.
Kanye kunye ne-gas barbecue kunye nefenitshala yangaphandle.
Indawo efanelekileyo yokuphumla okanye abantwana ukuba badlale.
Indawo yokupaka ingasemva kwipropathi kwidrayivu enkulu enegrabile, le ndawo kwabelwana ngayo kunye nabaxhasi beSihlomelo, kukho indawo eyaneleyo yezithuthi ezintathu.
Indawo entle kakhulu yosapho enezitulo eziphakamileyo zabantwana, iireyile ezi-2 zebhedi zokhuseleko, i-fireguard, isango lezinyuko x 2 kunye nebhedi yokuhamba ebandakanyiwe ukuze uyisebenzise.
*Zikhona iitawuli zelinen zebhedi kunye nezinto zangasese
*I-WiFi yasimahla kwisakhiwo sonke
*Ipakethe eyamkelekileyo equka igrosari/impahla eyimfuneko.
Umbane kunye ne-oyile zibandakanyiwe ekusetyenzisweni okufanelekileyo, ukusetyenziswa ngokugqithisileyo nokuba kukuphi na kuya kuhlawulisa.
Ukunikezelwa kweelogi kuya kunikwa, iilogi ezongezelelweyo zingathengwa kwindawo ngeendleko ezifanelekileyo.
I-£150 yediphozithi ebuyiselwayo iya kufuneka ngexesha lokubhukisha ehlawulwa kwiveki ngaphambi kokuba iindwendwe zifike.
Indlu yaseGadini yiBhodi yabakhenkethi yaseNorthern Ireland eVunyiweyo entle enamagumbi okulala amathathu elizwe elijonge iLough Foyle kunye neenduli zaseDonegal, ibekwe kwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo kwiNdlela yoNxweme yaseCauseway.
Kukuhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka kwidolophu yaseLimavady eneendawo ezininzi zokutyela, iindawo zokutyela ezisemgangathweni kunye neevenkile zekofu.
I-Eglinton ilali yasembalini yokulima kukuhamba ngemizuzu emi-5.
Iidolophu ezibukekayo zolwandle zasePortrush nasePortstewart zingaphakathi kwemizuzu engama-30 yokuqhuba.
IsiXeko esineNdonga yembali yaseDerry/Londonderry sinokufikelelwa kwimizuzu engama-20.
Imitsalane yeTrasti yeSizwe efana neendawo ezinkulu ze-UNESCO zelifa lemveli lehlabathi, ibhulorho yentambo yaseCarrick-a-rede, itempile yaseMussenden kunye neDownhill Demesne zonke zikumgama olula.
Beka kwindawo yochungechunge lwehlabathi oludumileyo lweMidlalo yeeTrone, kutheni ungakhe ukhenkethe.
UBenone Strand ophumelele ibhaso leBlue Flag yaseYurophu kunxweme lwemizuzu engama-20.
Wela umda ungene eDonegal ngemizuzu engama-25 kwaye ujonge eIreland eyona dolophu intle.
Isixeko saseBelfast kunye nemyuziyam eyaziwayo yeTitanic yehlabathi, iithiyetha kunye neepubs ezininzi zaseIreland kunye neendawo zokutyela zinokufikelelwa kwimizuzu engama-90.
Indawo entle esembindini yokuhlola unxweme lwaseIreland kunye neDonegal.
Ababuki zindwendwe bahlala kufutshane, siyafumaneka kuyo nantoni na efunekayo kwaye siyakuvuyela ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo. Ungamkela iindwendwe xa uceliwe ukuba kungenjalo ukusetyenziswa kwesitshixo sebhokisi kuyasebenza.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$188
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ballykelly